अन्तराष्ट्रिय – Nepal24News
Mar182018 by नेपाल २४न्युजNo Comments
किन भैराछ दिनहु बिमान दुर्घाटना ?? आज पनि अर्को विमान दुर्घटना, १० जनाको घटनास्थलमै मृत्यु
किन भैराछ दिनहु बिमान दुर्घाटना ?? आज पनि अर्को विमान दुर्घटना, १० जनाको घटनास्थलमै मृत्यु फिलिपिन्समा एउटा सानो विमान दुर्घटनामा परि १० जनाको ज्यान गएको छ। प्लारिडेलबाट बुलाकान प्रान्ततर्फ जाँदै गर्दा परेको अधिकारीले जनाएका छन्। फिलिपिन्सको नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका एक जना उच्च अधिकारीले १० जनाको ज्यान गएको पुष्टि गरेका छन्। ज्यान गएकामध्ये दुई जना विमान चालक रहेका थिए। विमान उड्न सुरु गरेको केही मिनेटपछि स्थानीय समयानुसार बिहान ११/२१ मा दुर्घटना भएको अधिकारीले बताएका छन् । विमान आवासीय क्षेत्रमा दुर्घटना भएको थियो । घटनास्थलमा अनुसन्धानका लागि अधिकारी पुगेका छन्। फिलिपिन्समा एउटा सानो विमान दुर्घटनामा परि १० जनाको ज्यान गएको छ। प्लारिडेलबाट बुलाकान प्रान्ततर्फ जाँदै गर्दा परेको अधिकारीले जनाएका छन्। फिलिपिन्सको नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका एक जना उच्च अधिकारीले १० जनाको ज्यान
तीनवटा पहाड फोडेर ३६ वर्ष लगाएर गाउँमा पानी ल्याउने यी व्यक्ति
चीनको गुइजहाउ प्रान्तमा रहेको सानो गाउँको जीवनस्तरलाई सुधार्नका लागि ह्वाङ दफाले १० किलोमिटर लामो पानीको नहर बनाउन तीनवटा पहाड फोडे जसका लागि उनलाई ३६ वर्ष लाग्यो । कोआवाङ्बा गाउँका प्रमुख ह्वाङ दाफाले सन् १९५९ देखि उक्त योजना सुरु गरेको र यसका लागि उनले आफ्नो जीवनको ३६ वर्ष कडा परिश्रममा लगाएर पूरा गाउँलेका लागि २४ औं पानीको सुविधा प्रदान गरे । उक्त नहर गाउँमा आउनुपूर्व कोआवाङ्बाको वरिपरि र त्यहाँका बासिन्दाका लागि पर्याप्त पानी थिएन । पूरै गाउँमा एउटा मात्र इनार थियो जहाँबाट पर्याप्त पानी लिन पाइँदैनथ्यो किनभने एकजनाले धेरै पानी लिँदा अर्काको भागमा अलिकति पनि नरहने डर थियो । ‘उक्त इनारबाट धेरै पानी लिन नपाइने भन्ने नियम बनाइएको थियो । यदि कसैले यस्तो गरे, कसैको भागमा बिहानको नास्ताको लागि पनि पानी नहोला भन्ने डर थियो । यहाँको यस्तो स्थितीले हामीलाई प्रेरित गर्यो,’ उप–प्रमुख सु झ
मनिला – फिलिपिन्समा एउटा सानो विमान दुर्घटनामा परी सात जनाको मृत्यु भएको छ । प्लारिडेलबाट बुलाकान प्रान्ततर्फ जाँदै गर्दा शनिबार मध्यान्ह विमान दुर्घटनामा परेको अधिकारीले जनाएका छन् । फिलिपिन्सको नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका एक जना उच्च अधिकारीले छ जनाको मृत्यु भएको पुष्टि गरेका छन् । उनका अनुसार छ ओटा मात्र सिटे विमानमा रहेका र मृत्यु भएका मध्ये दुई जना विमान चालक रहेका थिए । विमान उड्न सुरु गरेको केही मिनेटपछि स्थानीय समयानुसार विहान ११.२१ मा दुर्घटना भएको अधिकारीले बताएका छन् । विमान आवासीय क्षेत्रमा दुर्घटना भएको थियो । घटनास्थलमा अनुसन्धानका लागि अधिकारी पुगेका छन् ।
चिनको लागि आयो दु:खद खबर !!!
काठमाडौं–चीनको पहिलो अन्तरीक्ष केन्द्र टियागोङ्ग–१ अनियन्त्रित रुपमा पृथ्वीको सतहतिर खसिरहेको छ । यो छिट्टै पृथ्वीको जमिनमा आइपुग्ने अनुमान गरिएको छ । चिनियाँ अन्तरीक्ष एजेन्सीले सन् २०११ मा सो अन्तरीक्ष केन्द्र प्रक्षेपण गरेको थियो । नामको अर्थ ‘स्वार्गीय दरवार’ दिने टियागोङ्ग–१लाई चीनले सन् २०२० मा ठूलो र स्थायी खालको अर्को अन्तरिक्ष केन्द्र पठाउनु अघि परीक्षणको लागि प्रक्षेपण गरेको थियो ।सन् २०१६ को शुरुवातमै चिनियाँ अन्तरीक्ष एजेन्सीको उक्त केन्द्रसँग सम्पर्क टुटेको थियो । त्यसका पछाडी कुनै प्राविधिक गडवडी भएको बताइएको थियो । हाल उक्त अन्तरीक्ष केन्द्र पृथ्वीको सतहबाट लगभग २४० किलोमिटर माथि २९,००० कि.मी प्रति घण्टाको दरमा पृथ्वीको चक्कर लगाइरहेको छ । अन्तरिक्ष केन्द्र ‘बिना निर्देशन’ पृथ्वीको वायुमण्डलमा प्रबेश गरिरहेको सबैभन्दा ठूलो बस्तुमध्ये एक हो ।पृथ्वीबाट वैज्ञानिकहरुको निय
अमेरिकी सेना बोकेको हेलिकोप्टर इराकमा दुर्घटनाग्रस्त, सात जना अमेरिकी सैनिकको मृत्यु
वासिङटन अमेरिकी सेना बोकेको हेलिकोप्टर इराकको पश्चिमी क्षेत्रमा दुर्घटनाग्रस्त भएको छ । दुर्घटनामा परी सात जना अमेरिकी सैनिक अधिकारीको मृत्यु भएको अमेरिकी सुरक्षा अधिकारीले शुक्रबार जानकारी दिएका छन् । “विमानमा सात सैनिक थिए, ती सवैको मृत्यु भएको विश्वास गरिएको छ,” अमेरिकी अधिकारीले सञ्चार माध्यमसँग भने । उनले थपे उनीहरु सवै जना अमेरिकी सेवाका सदस्यहरु रहेका थिए । इराकबाट सिरिया जाने बेलामा हेलिकोप्टर दुर्घटनामा परेको र अन्य विवरणहरु आउन बाँकी रहेको समाचारमा जनाइएको छ ।
फेरि भयो अर्को सैनिक विमान दुर्घटना : ६ को मृत्यु, १४ घाइते !!!
सेनेगलको दक्षिणी भागमा बुधबार भएको एक विमान दुर्घटनामा परी कम्तीमा छ व्यक्तिको मृत्यु भएको छ ।यस घटनामा परी अन्य १४ जना घाइते भएका छन् ।चालकदलका सदस्यसहित २० यात्रु सवार रहेको सो हेलिकोप्टर तटीय क्षेत्र मिस्सीराहस्थित म्याङ्गरोभे जङ्गलमा खसेको जनाइएको छ । यस हेलिकोप्टरका चार चालक दलका सदस्यसहित २० यात्रु रहेका सैनिक प्रवक्ताले एएफपी समाचार समितिलाई बताएका छन् । सेनाले जारी गरेको विज्ञप्तिअनुसार उद्धारकर्ताले छ व्यक्तिको मृत्यु भएको जानकारी दिएका छन् । यस घटनामा परी घाइते भएका १४ जनको क्षेत्रीय अस्पताल काओलकमा उपचार भइरहेको र तीमध्ये तीन व्यक्तिको अवस्था गम्भीर रहेको जनाइएको छ ।यस दुर्घटनाको कारण अनुसन्धानरत रहेको जनाइएको छ ।
२९८ यात्रु बोकेको ठूलो दुर्घटना हुनबाट जोगीयो, यि भाग्यमानी यात्रु भगवानलाई सम्झिँदै बाँचे
एजेन्सी । नेपालमा भएको भयानक विमान दुर्घटनाको लगत्तै भारतमा २९८ यात्रु बोकेको विमान ठूलो दुर्घटनाबाट जोगीएको छ । साउदी एयरलाइन्सको एस वी(डढज्ञ विमान लखनऊको चौधरी चरण सिंह एयरपोर्टमा बिहिवार दुर्घटना हुनखोज्दा खोज्दै बचेँको भारतीय मिडियाहरुले उल्लेख गरेका छन् । जेद्दा बाट लखनऊ आइरहेको विमानमा टेक्निकल कारणले प्रेसर कम भएको थियो । उक्त समस्याको बाबजुद पनि उक्त विमानलाई सेफ ल्याण्डिङ गरिको भारतीय मिडियाले उल्लेख गरेको छ । विमानको टायरमा हवाको दबाव अचानक कम भएको र पाईलटको सुझबुझ र एयरपोर्टको समझदारीबाट उक्त विमानलाई सेफ ल्यान्डिङ गर्नमा सफल भएका छन् । विमानमा सवार २९८ यात्रुहरुको ज्यान बचेँको छ । नेपालमा हालैमात्र ७१ यात्रु सवार विमान अवतरणका क्रममा दुर्घटनामा पर्दा ५१ यात्रुले ज्यान गुमाएका छन् । अन्य घाइतेको भने उपचार भइरहेको छ ।
जब अमेरिकाका पुर्वरास्ट्रपति बाराक ओबामाले आफ्नै पत्नी मिशेल ओबामाको बारेमा आफै रुँदै तारिफ गरेपछि कार्यक्रममा उपस्थित सबै कुर्चिबाट उठे (भिडियोसहित)
काठमाडौ – बाराक हुसेन ओबामा अमरीकाका ४४औं राष्ट्रपति हुन्। उनी यस देशका प्रथम अश्वेत (अफ्रीकी अमेरिकी) राष्ट्रपति हुन्। उनले २० जनवरी, २००९ का दिन राष्ट्रपति पदको शपथ ग्रहण गरेका हुन्। ओबामा इलिनोइ राज्यबाट कनिष्ठ सेनेटर तथा २००८ मा अमेरिकाका राष्टपति पदका लागि डेमोक्र्याटिक पार्टीका उम्मेद्वार थिए। ओबामाले हार्भर्ड ल स्कूलबाट सन् १९९१ मा स्नातक गरे, जहाँ उनी हार्भर्ड ल रिभ्यूका प्रथम अफ्रीकी अमेरिकी अध्यक्ष पनि भए। सन् १९९७ देखि २००४ सम्म इलिनोइ सेनेटमा तीन सेवाकाल पूरा गर्नु अघि ओबामाले सामुदायिक आयो जकको रूपमा काम गरे अनि नागरिक अधिकार अधिवक्ताका रूपमा प्रेक्टिस गरे। सन् १९९२ देखि २००४ सम्म उनले शिकागो कानून विश्वविद्यालयमा संवैधानिक कानूनको अध्यापन कार्य पनि गरे। सन् २००० मा अमेरिकी हाउस अफ रेप्रीजेन्टेटिभ सीट हासिल गर्न असफल भएपछि जनवरी २००३मा उनको नजर अमरीकी सेनेटतर्फ पर्यो जहाँ उ
यति सुन्दर महिला सांसद, जब उनको सुन्दरतामा विपक्षी मन्त्रीहरु नै फिदा हुन्छन् संसदमा
एजेन्सी- यद्यपी विश्वमा धेरै नै सुन्दर महिला राजनितिज्ञहरु छन् । आफ्नो प्रतिभा र सुन्दरता दुवैको कारण उनिहरु चर्चित पनि छन् । यस्तै महिला मध्येकी हुन रोजी सेनानायेके । श्रीलंकाकी प्रमुख विपक्षी युनाइटेड नेसनल पार्टीकी सदस्य रोजी सेनानायके दुई दशकदेखि राजनीतिमा आबद्ध छिन् । उनी राष्ट्रसंघको गुडविल एम्बास्डर र मलेसियामा श्रीलंकाको हाइकमिसनरको रूपमा काम गर्दै आएकी छिन् । राजनीतिमा उनको पृथक् पहिचान भए पनि श्रीलंकाको संसद्का पुरुष सांसदले उनलाई वेलावेलामा संसद्को सुन्दरीका रूपमा चित्रण गर्ने गरेका छन् । एकपटक रोजीले संसद्को नियमित गतिविधिबारे जवाफ दिने क्रममा यतायातमन्त्री कुमारा वेलगामाले आफू रोजीको सौन्दर्यबाट प्रभावित भएको भन्दै रोजीलाई संसद् भवनभित्रै लाजमर्दो बनाएका थिए । ‘सुन्दर रानीले उठाएका प्रश्नको उत्तर दिन मलाई निकै खुसी लागेको छ’, यातायात मन्त्रीले भनेका थिए । रोजी पूर्ववि
जहाँ श्रीमानको मृत्यु भएपछि जिउदै श्रीमतीलाई पनि श्रीमान संगै एउटै खाल्टोमा गाडीन्छ ( भिडियो सहित )
थाईल्याण्डको एक गाउँमा अहिले सम्म सति प्रथा नहटेको पाईएको छ । जहाँ श्रीमानको मृत्यु भएपछि जिउदै श्रीमतीलाई पनि श्रीमान संगै एउटै खाल्टोमा पुररे दाह संस्कार गरिने चलन छ । समाजमा चलि आएका भिभिन्न बिसयलाइ प्रस्तुत गरिएको छ । काठमाडौं डेली जहाँ श्रीमानको मृत्यु भएपछि जिउदै श्रीमतीलाई पनि श्रीमान संगै एउटै खाल्टोमा गाडीन्छ भिडियो यहाँ बाट हेर्नुहोला:-